Home > Other Languages > Somali > Fact Sheets > Healthy Diet and Bowels
Cunto Caafimaad iyo mindhicirka
PDF | Maqal
Waa maxay faybar?
Cuntooyinka soo socdaa waxay qani ku yihiin faybarka
Faybar intee le’eg ayaan u baahnahay?
Cunista faybar kugu filan maalin walba
Cabitaanka ka yar?
Xoojinta faybarkaaga: si tartiiba ayay u shaqaysaa
Cunto caafimaad qabta oo ka kooban cunto qani ku ah faybarka (maado dhirta ama miraha laga hello oo dheefshiidka sahasha), cabitaan aad u badan iyo weliba jimicsi ayaa lagu talinayaa si looga dhigo malawadkeena mid caafimaad qaba joogtana u shaqeeya.
Faybarku wuxuu caawimaa in aan ka xafidanahay cudurada ku dhaca malawadka, baawasiirka, calool adayga (caloosha oo aan joogto u socon) iyo cudurada aan laga bogsoon sida cudurka wadnaha sonkorawga noociisa 2aad, wuxuu kaloo caawimaa xakamaynta miisaankaaga.
Faybarka waxaa laga hellaa wixii dhirta ka baxa. Kuwaas waxaa ka mid ah khudaarta, furutka, digirta (sareenka), natiska, iniinaha iyo siiriyalka (siiriyalka quraacda, rootiga, baastada iyo bariidka).
Talo khaas ah oo cuntada waxa laga yaabaa in looga baahdo cunta yaqaanka sida astaanta dhibsiga mindhicirka, cudurada mindhicirka nabarka leh, celin la’aanta saxarada, u dulqaadasha la’aanta guluutiinka, iyo xasaasiyad laga qaado cuntada.
Khudaarta iyo furutka
Dooro cuntooyin cusub, kuwa qasacadaysan, kuwa la fariisiyey ama kuwa la qalajiyey sida sabiibta, tiinka ama berdaha, buruunka, iyo timirta.
Cuntada siiriyalka ah – kuwa faybarka ku badan yahay
Quraacda faybarku ku badan yahay sida muesli, siiriyalka buushada ah iyo siiriyaalka Oats-ka ah
Faybarka aadka u sarreeya rootiyada (wholemeal, wholegrain ama grainy) nooca dhuuban, kuwa la ballaariyey iyo kuwa la qalajiyey,
Bariidka madaw-xigeenka ah, bariiska iska baxa (wild rice) ama baastada madow xigeenka ah
Cuntooyinka haska leh sida sareenka, buckwheat, burghal, chia, sabuul, millet, oats, quinoa, soor, rye, gashiiso, haruur, galay kakan iyo iyo galay ah
Dhamaan digiraha noocay doonaan ha ahaadeene waxaa ka buuxa faybar sida: black-eyed beans, borlotti beans, butter beans, cannelini beans, chick peas, haricot beans, kidney beans, misir, lima beans, mung beans, soy beans iyo peas jajaban. Cuntooyinka laga sameeyo xumuska waxaa ka buuxa faybar.
Natiska iyo xabuubka (Nuts and seeds)
Dhamaan xabuubka sida flax, gabaldayaha (sunflower), iniinaha macsarada iyo poppy seeds, dhamaan natiska sida almonds, cashews, hazelnuts, macadamia, lawska, pine nuts, pista chios iyo walnuts.
Ugu yaraan 25–30 garaam oo faybara maalintii Arag shaxda hoose qadarka faybarka aoo aad uga baahan tahay cuntooyinka kala duwan.
FAYBARKA AADKA U BADAN FAYBAR (g) DOORASHADA FAYBAR HOOSEEYA FAYBAR (g)
½ koob cagaar ama khudaarta jaallada ah 2½ 1 koob oo ah cabitaanka khudaarta 0
1 jeex fpiece of furut ah 2 1 koob cabitaanka furutka ah 0
1 xabbad rooti ah oo midrood ama wholemeal 2 1 xabbo oo ah rooti cad 1
1 koob bariis ah oo ah midaw xigeen 1½ 1 koob bariid cad ah 1
Siiriyalka quraacda: 2 laba xabbo oo ah buskut ama ¾ koob oo ah oats-ka ama muesli aan dubin 3½+ Hal saxan oo siiriyal ah ama la kala-hufay sida sabuul la nidaamiyey ½–1
Digir (½ koob) 7
Natis isku-qasan (1/4 koob) 3
Si aad u gaarto 25–30g oo faybar ah maalin walba, isku day kuwan soo socda:
Cun khudaar intaad awoodo (5–6 xabbo maalin walba)
Dooro ugu yaraan laba hal oo furut ah maalin walba (kaas oo aan maqaarka laga qaadin hadday suurtawdo)
Dooro cunto siiriyal ah oo faybarkeedu sarreeyo (wholemeal ama wholegrain) badso noocya aan ka hayn caddaan ama mid la-kala hufay
Ku dar digir, natiska ama xabuub waxaad si joogta cunayso
Dooro ugu yaraan 5–6 khudaara oo cusub maalin walba (oo maqaarku la socdo haddii ay suurtagal tahay), la qaboojiyey, la qalajiyey ama khudaar la qasacadeeyey oo cusbadu ku yar tahay.
Waa maxay mar-qaad khudaar ahi?
Nus koob barakooli, isbiinaj, dabacaseeye, bocor, sabuul macaan iyo digir (peas)
Hal koob oo ah caleema cagaaran ama khudaar salad ah oo ceeriin
Nus dhexdhexaad ah oo ah bataato, bataata macaan ama tamaato dhexdhexaad ah
Xadad intaad ka qaadanayso khudaar la dubay sida bataato la shiilay ama qalajiyey
Dooro ugu yaraan laba-marqaad oo furut ah maalin walba (maqaarkiisa wata haddii ay suurtawdo). Waxaad cuni kartaa mid cusub, la kariyey, la qaboojiyey, la qalajiyey ama la qasacadeeyey oo ay ku jiraan cabitaan dabiici ah (maaha macaan).
Waa maxay furut?
Hal tufaax dhexdhexaad ah, moos, liin ama beere (pear)
Laba xabo oo abrikoot ah, kiwifurut ama balam (plums)
Hurut la qasacadeeye (oo aan sonkor lagu darin)
30g oo ah furut qalalan (1½ malgacad oo ikoot sabiiba ama 4 abrikoot oo qalalan
Furutka qaarkiis ayaa loo isticmaalay in lagu caawimo joogto shaqaynta mindhicrka
Dooro cuntada siiriyalka oo leh faybarka (wholemeal ama wholegrain) in ka badan kuwa cadaanka ah ama rootiga ama la sifeeyey.
Dooro siiriyaalka quraacda oo aan waxba laga saarin faybarkiisuna sarreeyo
Oats-ka, boorajka, muesli dabiici ah, qamadi faybarkeedu aad u sarreeyo ama siiriyal buushada ka yimid
Ku dar faybar quraacda siiriyalka ah ee ugu jeceshahay
Ku firdhi natiska ama iniinaha. LSA (linseed, gabaldaye iyo almond)
Ku dar 1–2 malgacadood oo ah buusho ama iniinaha geedka loo yaqaan flax
Ku qas siiriyalka oo jeceshahay oo leh faybar aad u sarreeya quraac ahaan
Dooro rooti aan waxba laga saarin ama rooti iniinihii wata, duban, mid dhuudhuuban, rootiga pita, baastada ama bariis
Rootiga aan waxba ama mid iniina wata, rootiga dhuudhuuban, rootiga, nooca la buunbuuniyey, mountain bread ama rootiga loo yaqaan dark rye
Baastada bunniga ah (ama baastada bunniga oo ay ku qasan tahay baastada cadaanka ahi)
Bariiska bunniga ah (ama bariiska cadaanka ah oo ku qasan bariiska bunniga ah)
Baastada iyada oo khafiifka ah la ballaariyey oo lasaanyada ah waxna aan laga saarin
Bariiska aan waxba laga saarin oo la shiilay ka dibna lagu walaaqay, risottada iyo hilibka jarjaran
Rooti leh iniino halkii uu ka ahaan lahaa caddaan la khafiifiyey oo burburaya
Ku dar iniinaha leh faybarka aad u sarreeya marka la karinayo ama la diyaarinayo cuntada
Maraqyada: ku dar digir, misir, nooc digir yaryar ah oo la kala jebiyey ama haruur
Salad: isticmaal, bariis bunni ah, wild rice, buckwheat ama qamadi la qalajiyey (burghal) sida tabouli
Isticmaal bur aan waxba laga saarin ama oats-ka halkii aad ka isticmaali lahayd bur cad, tusaale ahaan muffins, pikelets ama dusha uga darida oat la burburiyey
Marka badeeco si fiican u faxday loo baahdo sida scones ama keeg u isticmaal rooti cad oo lagu qasay jab rooti oo aan waxba laga saarin
Isticmaal rooti mirihii leh oo burbursan halkii aad ka isticmaali lahayd inaad ku duldaadiso kalluun ama digaag
Waxaa ka mid ah, natiska iyo iniina joogta uga mid noqda cuntadaada
Ku firdhi natiska iyo iniinyaha siiriyaalka quraacda
Isku day digirta duban ama lawska oo leh rooti duban oo faybar aad u sarreeya
Karinta ama diyaarinta cuntada
Ku dar misir, haruur aan waxba laga saarin ama digirt yaryar oo la kala jebiyey maraqa iyo cuntooyinka ay ka midka yihiin lasaanyada, casseroles iyo baarli aan waxba laga saarin ama sigir la-kala jebiyey oo lagu daro cuntooyinka maraqa sida lasaanyada, casseroles ama karin-jilcin ama dooro cunto ku salaysan digir sida daal (dahl) ah stews, ama dooro cuntada ku salaysan digirta sida daal (dahl)
Ku dar diraha baastada sida isbageeti bolonyeeso, burritos, jilli concarne ama tacos
Ku dar digiraha la qasacadeeyey, afar nooc oo kala duwan, digirta loo yaqaan chickpeas ama natiska la dubay
Waxyaryar oo miiska la soo saaro (natis aan cusba lagu darin ama furut la qalajiyey)
Salool, caadi ah ama waxyar oo cusbo ah lagu daray
Waxyaalla ka samaysan rooti khafiif ah oo la qalajiyey ama xumus
Faybarka iyo biyuhu wadajir ayay u shaqeeyaan si ay noo joogteeyaan. Haddii aadan cabin biya kugu filan, faybarkuna bato waxaa laga yaabaa in calooshu ku fadhiisato, sidaas darteed biya badan cab maalin walba.
Waxaa la fadilayaa biyaha marka la dhinacdhigo biyaha sonkorta leh (sida cabitaanka macaan, kordiyaalka, cabitaanada cayaaraha iyo tamarta bixiya) iyo cabitaanka furutka, maadamaa biyuhu aanay lahayn kalori oo aanay keenen in miishaan ku saaraan. Sidoo kale biyuhu waxay ka fiican yihiin cabitaanka macaan iyo cabitaanka furutka ka yimid maadaama aysiidka biyahaani ay waxyeelli karaan daboolka kore ee ilkaha ee loo yaqaan enamel.
Sida la isku raacsan yahay waa inaad cabtaa 1.5–2 litir oo biya ah maalintii (6–8 galaas) haddii aan tala kale aanu ku siin dakhtarkaagu. Cabitaan badan ayaa laga yaabaa in loo baahdo xilliga hawadu kulushahay iyo markaad jimicsiga samaynayso.
Ka waran kafeega iyo shaaha?
Shaaha iyo kafeega waxaa lagu xisaabin karaa cabitaan ahaan
Shaaha iyo kafeega (ama cabitaanka caffeine-ta) waxaa laga yaabaa in loo baahdo in la yareeyo haddii aad dhib ku qabto kaadicelinta. Arrintaan kala hadal mihnadlaha caafimaadka haddii ay dhib kugu tahay arrintaani
Siyaadi faybarka aad qaadanayso. Isku day inaad samayso hal isbedel asbuuciiba adoo ka fogaanaya neef, caloosha oo ku fuurta, majiirasho iyo shuban iyada oo si degdeg faybar isu dul fuullo.
Cabitaano badan ayaa caawima in faybarku u shaqeeyo si wanaagsan, marka cab biya badan si aad u siyaadiso waxtarka faybarka.
Isku day inaad ka fogaato qorshaha cunida faybar hooseeya adiga oo ku tiirsan weheliyayaal faybar leh ama cuntooyin ay ku jiraan faybar qooshan sida buushada ama qubka iyo haska psyllium. Kan ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo faybar kugu filan. Kuwaan ayaa laga yaabaa faybar kugu filan. Waxaa laga yaabaa in kuwaasi ku siiyaan faybar kugu filan laakiin waxaa laga yaabaa inuu kaa maqan yahay faybarka loo baahan yahay inuu caloosha xafido. Haddii aad u baahan tahay faybar siyaada ah oo aad jeclaan lahayd inaad hesho macluumaad siyaada ah, la hadal mihnadlayaalka caafimaadka ee saxara celinta ama dhakhtarka qaabilsan cuntada.